यसरी सुरु भयो शुकामना दिने चलन, शुभकामना पनि कस्ता–कस्ता ? | Rajmarga
यसरी सुरु भयो शुकामना दिने चलन, शुभकामना पनि कस्ता–कस्ता ?
विश्वमा सर्वप्रथम शुभकामना सन्देश पठाउदा आफ्नो आन्तरिक भावना पनि लेखी पठाउने चलन बेलायतबाट भएको हो । यसको श्रेय विश्वविख्यात साहित्यकार चाल्र्स डिकेन्सलाई जान्छ । उनले आफ्नो एक मित्रलाई एउटा कडिम क्रिस्मसको शुभकामना लेखी पठाएका थिए ।
यसो त इन्साइक्लोपेडिया ब्रिटानिका अनुसार विश्वमा नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिने प्रचलन रोमबाट शुरू भएको पाइन्छ । त्यति बेला रोमबासीले आफ्ना रम्राटलाई भेटको रूपमा सम्मान गरेको शुभकामनापत्र एक किमिसको धातुबाट निर्माण गरिएको हुन्थ्यो । तर आधिकारिक रूपमा भने सन् १९४३ देखि यो परम्पार बेलायतको लण्डनबाट शुरू भएरनय मुलुकहरूमा पैmलिएको पाइन्छ । शुभकामना कार्डमा विभिन्न चित्रहरू अंकित गर्ने प्रचलन पनि इस्वी संम्वत् १८४३ बाटै शुरू भएको हो ।
चीनमा कुनै समय तामाको सिक्कामा वा स्वर्ण पदकमा शुभकामना लेखेर एक आपसमा बधाई, मंगलमय कामना पठाउने प्रचलन थियो भने आजकल सानो चिटिक्क परेको रूमालमा शुभकामना तथा बधाई सन्देश लेखेर आदान प्रदान गर्ने प्रचलन छ । इजिप्टमा भने आज पनि नयाँ वर्षको दिन एउटा सुगन्धित अत्तरको शीशीमा सुखमय जीवनको शुभकामना पठाउने प्रचलन छ । रोममा यसदिन प्रेमी–प्रेमिकाहरू दुईपातहरू एक–आपसमा गाँसेर शुभकामना एवं बधाई दिने गर्छन् ।
शुभकामना सनदेश पठाउने मामलामा सबैभन्दा महंगो कार्ड जर्मनी निवासी होली नजरले आफ्नो साथीलाई पठाएका थिए । सो कार्डमा प्राचीनचित्र अंकित थियो । जसको मूल्य सोही समयमै लाखौं डलर मानिएको थियो ।
उक्त कुरा नजरले कार्ड पठाइसकेपछि मात्र थाहा पाए । रमाइलो कुरो त अझ के भएको थियो भने उक्त कार्ड साथीसँग माग्दा नदिएकाले अदातलमा मुद्दा लड्ने होली नगर आपैmले मुद्दा हारेका थिए ।
विश्वमा अहिलेसम्म सबैभन्दा लामो ग्रिटिङ्ग कार्ड ई.सं. १९६७ मा भियतनाम युद्धको बेला त्यहाँ पुगेका अमेरिकी सिपाइहरूलाई पठाइएको थियो । ७ कि.मी. लामो उक्त ग्रिटिङ कार्डमा १ लाख अमेरिकीहरूबाट हस्ताक्षर गरिएको थियो । कार्डमा उपराष्ट्रपति लगायत थुप्रै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
—लामो कार्डको सन्दर्भमा १ जनवरी १९८९ मा तत्कालनि सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्भाचोभले नव वर्षको शुभकामनाअन्तर्गत एउटा यस्तो कार्डपाए जुन कार्ड १५ मिटर लामो र १ मिटर चौडाइ थियो । त्यो शुभकामना कार्ड उनलाई एक व्यवसायीले पठाएका थिए । उनले त्यस कार्डमा २० लाख मानिसको हस्ताक्षर गर्न चाहेका थिए तर समयाभावले पूरा हुन सकेन ।
Previous post: स्वार्थ र सीमाभन्दा माथि उठ्न सभापति देउवाको आग्रह
Next post: भारतमा आईपीएल, करोडौंको बाजी नेपालमा